သက်ပြင်းချမိသော အကြိမ် များလာပါပြီကော ~ Myanmar Express
အော်..သမ္မတကြီးကျေးဇူးကြီးပါတကား လွှတ်စေချင်တော့လည်း လွှတ်ပေးလိုက်ပြီ...။ဘာလို့အခုမှ လွှတ်တာလဲဆိုတာတွေရောဖမ်းတာလည်းသူတို့ ..လွှတ်တာလည်းသူတို့ ရော အစုံပဲထွက်လာလိုက်တဲ့ပြောသံတွေ...။ဘယ်သူတွေပြောတာလဲ...ဟုတ်လား..မသိလို့မေးတာလား..သိလို့မေးတာလား...။ဘယ်သူတွေရှိရမှာလဲ...အစိုးရအတိုက်အခံဟူသည် အစိုးရလုပ်သမျှ မျက်မှန်နက်တပ်ပြီးကန့်လန့်တိုက်နေသောသူသည်သာ အတိုက်အခံနိုင်ငံရေးသမားကောင်းဖြစ်ပြီးနိုင်ငံရေးမည်၏လို့ ပုံသေကျက်မှတ်ထားသူတွေပေါ့ဗျာ...ဘယ့်နှယ်ဗျာ...လွှတ်ပေးတာက သမ္မတကြီး...ဖအေကျော်ပြီး မိထွေးအ၀ှာကို လျှာနဲ့ယတ်တဲ့လူတွေက လည်း မိထွေးနဲ့ဗြမ္မာ့ခါင်းပြတ်ကြီးကို .ခယတယ်...။ပိုက်ဆံကောက်ရတာ ကိုကြီးကျော် မ လို့ ...ထီပေါက်တာ အဘ မလို့ ...ယောကျာင်္းရာထူးတို့းတာရိုးရာစောင့်ရှောက်လို့ ..ဆိုတဲ့ဟာတွေလိုဖြစ်နေပြီ...။ဒီမှာကြည့်ကြ...မောင်မောင်ဒိန်ပြောတာမှန်မမှန်ဆိုတာ...။ စဉ်းစားသာကြည့်တော့...ဘာဆိုဘာမှ မဆိုင်...မြစ်ကြီးနားက အဘိုးအိုတစ်ယောက် အိမ်ပေါ်ကနေ သေးပေါက်ချတာကော့သောင်းမှာ မိုးရွှာရော ဆိုသလိုမျိူး တခြားစီပဲ....ထောင်ကထွက်လာခါစ အထည်ကြီးပျက်များက ဘယ်လက်နဲ့ ထမင်းစားရင်ကောင်းမလားညာလက်နဲ့ ပြန်စားရင်ကောင်းမလား စဉ်းစားနေချိန်မှာ ရောအင့်စား ဆိုပြီး ခွံကျွေးတဲ့လူတွေရဲ့ကျွေးသလောက်စားရင်ကောင်းမလား ဝေဝေဝါးဝါး အချိန်ကို မြှောက်ပေးလိုက်တာလည်းအမေကြည် ကျမ္မာရေးမကောင်းတုန်း ပြန်လာတဲ့ ဒေါ်စုကို 88 မှာ ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်အဖြစ် ကာက်မြှောက်ပေးသလို နဲံ့ ထူးမခြားနားပဲ..သူတို့ လိုချင်တဲ့ ပုံစံမျိူး ရင်ရရ မရရင်ကြွ တွေ ၊ အစိုးရလုပ်သမျှ မကောင်း..ငါတို့ပြောတာ အကောင်းဆိုတဲ့ နလိန်ပိန်းတုံး တွေ အတွက် ဒေါ်စုက သူတို့လမ်းကြောင်းက သွေဖယ်ပြီး90 ရလဒ်က အရေးမပါတော့ပါဘူးဆိုပြီး ကောက်ကခနဲ လွှတ်တော် ထဲဝင်မယ်ဆိုတော့တကမ္ဘာလုံးမှာ မရှိတဲ့ 100 % စံချိန်တင်ထောက်ခံမှူဆိုပြီး အော်ကြပြောကြရော...နောက်တော့လည်း ပူညံပူညံထွက်လာပါလေရော...အဲဒါနဲ့ ပဲ NLD လည်း ကျောက်ဆောင်ပေါ်ကြွေကျတဲ့ဥသျှစ်သီးလို့ ကွဲနေတာများ...။သူတို့လိုချင်တဲ့ ပုံစံကို NLD နဲ့ ဒေါ်စုက မလုပ်ပေးနိုင်ပြန်တော့ ခေါင်းဆောင်အသစ်လေးပေါ်ရင် ကောင်းမယ် ဆိုပြီး ရှိရှိသမျှ နတ်မှန်သမျှ လိုက်ဆုတောင်း နောက်ဆုံး လမ်းဘေးမှာ ရပ်ထားတဲ့ တက္ကစီက ရှပ်နက် ကိုတောင် သူလည်းနတ်ပဲ ဆိုပြီး ဦးကုန်းချ..ခေါင်းဆောင်နောက်တစ်ယောက်လို့ တောင့်တနေချိန်သမ္မတကြီးက လွှတ်စေ ဆိုတာနဲ့ အံကိုက်ထွက်လာတဲ့ ဗြမ္မာ့ဦးခေါင်းကြီးများနဲ့တွေ့ပါလေရောဗျာ..(သိတယ်မလား ..ဗြမ္မာ့ဦးခေါင်းဆိုတာ.တင်စားတာမဟုတ်ဘူး.ဗြမ္မာကြီးခေါင်းပြတ်တော့ မီးရှီူ့လိုလည်းမရ ရေထဲချလိုလည်းမရ လေထဲထားလို့လည်းမရသတ္တဝါတွေဒုက္ခရောက်မှာစိုးလို့ လေ..အဲလိုကြီး ဘယ်နေရာမှ ထားမရတဲ့ဟာကိုပြောချင်တာ.ထပ်ရင်းရရင် သဘောင်္သားလေ..သဘောင်္ပင်စည်လေ..ဘုရားထုလို့လည်းမရ..ရုပ်သေးလည်းထွင်းမရ..ထင်းလည်းစိုက်လို့မရ...အဲလိုကိုပြောချင်တာ)အရူးများကို ဘုံ မြှောက်ပေးရင်တော့ ဘာကောက်စားတယ်ဆိုလားပဲ...မင်းကိုနိုင်ကြီး လွှတ်ပြီ လွှတ်ပြီလို့အွန်လိုင်းမှာ အော်ကြ မီဒီယာတွေ ကလည်း ဂျာနယ်ရောင်းကောင်းအောင်အော်ကြနဲ့ ...အဲအချိန် ကျွန်တော် အိမ်မက်တစ်ခု သွားမက်တယ်...အဲဒါကို ကျွန်တော် ဗီဒီယိုဖိုင်လေးနဲ့ ပြမယ်...ဘာအိမ်မက်လဲဆိုတာ...။ဘာအိမ်မက်ထင်လဲ...။ မင်းကိုနိုင်တို့ ကို လွှတ်လိုက်သော အချိန်တွင် ဘလော့ဂါ မက်သော အိမ်မက်ဟုတ်ကဲ့..အဲဒီ အိမ်မက်လေးပါပဲ...အိမ်မက်ကလန့် နိူးတော့ ဘေးက သူငယ်ချင်းပြောသံကြားလိုက်တယ်..မင်းကိုနိုင်တို့ ကိုကိုကြီးတို့ကို လွန်ခဲံ့တဲ့ ၁ နာရီလောက်က လွတ်ပေးလိုက်ပြီတဲ့...။အော်ဒါကြောင့် ကျွန်တော် ဒီအိမ်မက် မက်တယ်လို့ ထင်ပါတယ်...။နောက်တော့ တတ်လာတဲံ့သတင်းတွေကတော့ သိတယ်မလား...ကလင်တန်လာတုန်းကလိုပဲ...အခု ဘယ်ရောက်နေပါပြီ..အခု ထမင်းစားနေပါပြီ..အခုချီးစား(အဲ)ချီးပါနေပါပြီ..တောက်လျှောက်..ဘာတွေမှန်းကို မသိပါဘူး...ထောင်ကထွက်ထွက်ချင်းလူထောင်ပေါင်းများစွာလာကြိူဆိုတဲ့....အေးပေါ့.. ဓါတ်ပုံထဲမှာတော့ ထောင်ချီနေမှာပေါ့...ထောင်ကထွက်တာ ဒင်းတစ်ယောက်ထဲမှ မဟုတ်ပဲ...သူ့ သားကိုယ့်အမျိူးတွေလာကြိူရင်း လူတွေအုံနေလို့ ဘာလဲဟ ဝင်ကြည့်တဲ့သူက လည်း ကြိူဆိုသူဖြစ်သွားတာပဲ.... ကြပ်ကြပ်လူပ်နော်...ဓါတ်ပုံသတင်းထောက်တွေ...ငါတို့က ငပိန်းတွေဆိုတော့ သိပ်မသိဘူး...။ဆရာသမား မင်းကိုနိုင်ကိုလည်း ပြောလိုက်ပါအုံး..ထောင်ကထွက်လာတာ ပုဒ်မ ၄၀၁ ပါလို့ နော်..နောက်ပြီး ခင်ဗျား လွတ်လွတ်ချင်းရွှေပေါက်ပင် ဆရာတော် ဘာဟောလဲ မှတ်မိလား ဒီဘက်နားက၀င် ဟိုဘက်နားကထွက်သွားမှာစိုးလို့ပြန်ပြောပေးပါ့မယ်...သေသေချာချာနားထောင်နော်ဗျငါ့မောဟ ငါ့ဒေါသ ငါ့မာနက ငါ့ကိုပြန်၍ နှိပ်စက်သည် တဲ့..၃ ခွန်းတိတိပြောလိုက်တာဆိုဗျ ..မှတ်ထားအုံးနော်...၈၈ တုန်းကလိုကြွေးကြော်သံနဲ့ထပ်မ၀င်လာနဲ့တော့..တခါလာလည်း ခြေထိုးနောက်တခါလာလည်း ခြေထိုး နဲ့ခြေထိုးနဲ့ တော့ မင်းသားမလုပ်ချင်စမ်းပါနဲ့ဗျာ...အဲလိုမင်းသားတွေပဲ ပတ်မကြီးတွေထိုးထိုးဖောက်တတ်တာ ပရိသတ်တွေ အသိပါ..ဆိုတာ လက်တို့ လို့ပြောလိုက်ပါ...။ဆိုင်ရာလူကြီးတွေရော...ခေတ်ပညာတတ်တွေရောပညာရေးသည်အဓီကဆိုပြီး ပညာရေးတိုးတတ်အောင် ဝိုင်းဝန်းဆောင်ရွက်နေချိန်အမှားတွေ ထောက်ပြ ပြင်ကြ ဆင်ကြ ဖြစ်နေချိန် မင်းကိုနိုင်အော်သံကြီးက အနာဂတ်ပန်းဖူးတွေတွက် လေနီကြမ်းကြီးဖြစ်နေပါပေါ့လား....။ယောင်တောင်တောင်လူငယ်တွေ မြန်မာပြည်သားအချင်းချင်းမို့ ညီလေးတွေမို့ပြောလိုက်ပါရစေ...။ပညာရေးသာ အာရုံစိုက်ပါ..ယောင်တောင်ပေါင်တောင်နဲ့ ဟိုအော်ဒီအော်လုပ်မယ်မကြံကြပါနဲ့ ...ကြားဖူးလား မိုးသီးဇွန်ကို အားကျရင်တော့ လုပ်ပေါ့ကွာ..ပြည်သူချဉ်ဖတ် .သူတို့အချင်းချင်းတောင် တို့စားတဲ့ ချဥင်္ဖတ်လေ...သိတယ်မလား...။ မိုးသီးဇွန်ဆို အဲလိုကို ချစ်ကြတာ ယောင်တောင်ပေါင်တောင် လိုက်အော်မယ် ဟေလားဝါးလား ထောက်ခံတယ် တဖြောင်းဖြောင်းနဲ့ လျှောက်လိုက်လုပ်မနေနဲ့ ...အဲဒီလူတွေတောင် သူများကျွေးမှစားရမဲ့ ဘဝရောက်နေတာရယ်...သရဲခေါင်းအယောင်ဆောင်ပြီး ပြည်သူအတွက်အော်ပြီး လမ်းဘေးတောင်ရေချမ်းအိုး မတည်နိုင်သေးတဲံအပြင် ဆောက်ထားတဲံ ရေချမ်းစင်တောင် ရိုက်ခွဲသူတွေကိုမြျှောက်ပေးခဲ့တယ်ဆိုတာလည်း မမေ့နဲ့ ...။ ရူးကြောင်မူးကြောင်တသိုက်နဲ့ ကောင်းစားအုံးမည့် ပညာရေး ဘယ်သူမှလက်မခံထောက်မခံတာတောင် လျှောက်အော်တဲ့ ဒေါင်းအလံစိုက်ချင်တဲ့ လူတစ်မျိူးလည်းရှိသေး၏ ဘာလဲ..အရူးချီးပန်းး ကျောင်းနံရံတဝ်ိုက် ဒေါင်းအလံစိုက်တော့ဘာဖြစ်မလဲ88 ပဲသွားကြည့်တော့..သိပ်မပြောဘူး...။ဒေါင်းအလံစိုက်တိုင်း ပညာရေးအထောက်အကုပြုရင် လာခဲ့...ဒေါင်း is the ဘာဘာ ဆိုပြီး တနှစ်လုံးထိုင်သင်နေကြ..စောက်ရူးတွေရဲ့...။ကျောင်းပြေးပြီး ဒေါင်းတယ်ကွာ ဒေါင်းတယ်ကွာနဲ့ပိုကာငြိမ့်တုန်းကငြိမ့်ပြီးမှ အခုမှကြားဖူးနားဝနဲ့ ဒေါင်းအလံစိုက်ချင်တယ်ပေါ့လေ...။ မင်းတို့လို လူငယ်တွေ ရှိမဲ့နိုင်ငံကတော့ဟင်းးးးးးး လို့ ပဲ သက်ပြင်းအခါခါချတယ်...။။လွှတ်ပေးတာကရည်ရွှယ်ချက်လေးကောင်းသလားမမေးနဲ့.ဒို သမ္မတကြီးရဲ့စိတ်ကူးကဒီလိုလေး လွှတ်ပေးလိုက်တဲ့လူတွေက တခုမှ အဲလိုဖြစ်လာမလားဆိုတာတော့ ရင်တမမနဲ့ စောင့်ကြည့်ရအုံးမယ်...နိုင်ငံတကာက တင်းကြပ်မှုတွေ လျှော့ချကြ ပိတ်ထားတာတွေ ဖွင့်ကြနဲ့ အားရဝမ်းသာပြောနေကြ...ဆွေးနွေးကြ...တိုင်းတပါးအလုပ်လုပ်နေတဲ့သူတွေကြားမှာလည်း အရင်ကလို မဟုတ်တော့ဘူးဟဲ့..နင်တို့ မြန်မာတွေ တိုးတတ်တော့မယ်..မြန်မာခေတ်ရောက်တော့မယ် လို့တပါးသားတွေ ပြောလာတာကို တပါးမှာ အလုပ်လုပ်နေသူမြန်မာများက ဂုဏ်ယူကြ တဆင့်ပြောကြ ဖြန့်ဝေကြနဲ့ ကျက်သရေဝေနေတုန်းလေးမှာသူတို့ ပဲ မဟုတ်သေးဘူး မလွှတ်လပ်သေးဘူး...ကျန်သေးတယ်...ဆက်တိုက်ရအုံးမယ်တို့ ...ဖွင့်ချိန်မတန်သေးဘူးတို့အော်တုန်း...ခွေးလောက်တောင် ဦးဏှောက်မရှိတော့ပါလားးအဲလို ဦးဏှောက်တွေကို ဘာလို့ များ နိုင်ငံတော်က နှစ်ရှည်လများ အပြောခံ အထင်မြင်စောင်းခံပြီး ထိမ်းထားရပါလိမ့်..လျှပ်စစ်ထိုင်ခုံတို့ကြိူးတို့ နဲ့ ပဲ တန်တဲ့ လူအရေခြူံလဒတွေကိုများဗျာလို့ သမ္မတကြီးကို တိုက်ရိုက်မေးပစ်လိုက်ချင်ပါတယ်...။ဒီမိုး ဒီလေ ဒီလူတွေ ကတော့အရင်ကျင့်သုံးခဲ့တဲ့ မအောင်မြင်တဲ့ နိုင်ငံရေးကျားကွက်ထဲမှာ ပွန်းရုပ်တွေချကျွေးပွန်းရုပ်တွေကုန်မှ ပါဝါတွေထုတ် ပါဝါတွေကုန်မှ ဘုရင်မကို လူလုံးပြပြီးကယ်ကြပါ တဘက်ပြိုင်ဘက်က ညစ်ပတ်နေပါတယ် လို့ အော်ခဲ့တဲ့ ဗျူဟာတွေ ပြန်သုံးအုံးမယ်လို့ လည်း မီဒီယာတွေကိုခေါ်ပြီး ကြေငြာနေတော့ကာ အင်း ဒီနိုင်ငံမှ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းပြောခဲ့သလို ဖာ မဖြစ်ရင် ဘယ်နိုင်ငံမှ ဖာမဖြစ်တော့ဘူး...လို့အခါခါတွေးရင်း အခါခါ သက်ပြင်းတွေချနေမိတော့တယ်ဗျာ.....****************************************************************ဖအေ ရှာသူများသို့ ..... ပထွေးတွေ မိထွေးတွေ အားကိုးမနေနဲ့..မင်းတို့ အဖေအရင်းဘယ်သူဆိုတာ သိရအောင်.....ပုံလေးသေသေချာချာကြည့်ကြအုံး *************************************************************** မောင်မောင်ဒိန်http://mgkyautkhae.blogspot.com/ မှ ကူးယူဖော်ပြပါကြောင်း.
17 January 2012 01:37
အိုးးးးးးးးးး ရက်စ်.... MEG ... အဲလို မလုပ်ရဝူးလေ...။ ဘယ့်နှယ့်... တော်ကြာ ထိုင်ငိုနေဦးမယ်ဗျ...။ ခင်ဗျားတို့ဗျာ... သိပ်မှန်တဲ့အရာတွေ မရေးရဘူးဗျာ... ဟားဟားဟား...။ ရေလည်လန်ထွက်နေတာပဲဗျို့... အားပေးနေတယ်... ဒူးသာဒူး MEG ရေ... ခင်ဗျားတို့ရှိမှ ဒင်းတို့ ခြေငြိမ်မှာ... မဟုတ်ရင် ကိုယ့်ကိုယ်ကို အဟုတ်ကြီးထင်လို့ ဒင်းတို့ မြောက်တောက်တောက်ဖြစ်နေဦးမယ်... ဘယ့်နှယ့်ဗျာ... အလကား ဆန်ကုန်မြေလေးတွေ...။
yas,,yes,,yes,,,,,,, very good writer,, good
Our Learder Ko Min Ko Naing တဲ့ဘယ်သူကပေးထားတာလည်း။ Our ဆိုတဲ.စကားလုံးမှာ..ကျုပ်တို.လည်းပါတယ်လေ ။ဒါပေမဲ.မင်းကိုနိုင်ဆိုတဲ.ကောင်ကိုတော့ခေါင်းဆောင်လို့တခါမှ့မတင်မိပါလား။ လူလေး၃ ယောက် ၄ယောက်လောက်ကခေါင်းဆောင်တင်တယ်ဆိုတာ..သူခိုးတို.ဓမြတို့..ဒိလောက်ပါဘဲ။ နိုင်ငံတော်အတွက်ကတော့ခေါင်းဆောင်တင်တယ်ဆိုတာ..ကျုပ်တို.ရွေးချယ်ပေးလိုက်တဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စာလှယ်တွေဘဲရှိ.တယ်။ သူတို.ကသင်.တော်လို.ရွေးပေးတာဆိုရင်တော.ဟုတ်တာပေါ့။ခုတော.ဘယ်က။။ကလေကချေတွေကရွေးထားလို.ခေါင်းဆောင်လို.လာပြောနေရတာလည်း။ ရျက်တတ်ရင်လဲသေဖို.ကောင်းတယ်..မင်းကိုနိုင်ရယ်။ အလုပ်မှ.မလုပ်တတ်တာ..မလုပ်တတ်တော့ပိုင်ဆံလွယ်လွယ်ရမဲ့ဇာဂနာလိုပေါ့အရည်မရ အဖတ်မရတာတွေပြော..နိုင်ငံတကာကပေးတဲ.ထောက်ပံကြေးတွေရ။..တော်သင်.ပါပြီ..မင်းကိုနိုင်ရယ်...
17 January 2012 15:39
အဟီးးးးးကျုပ်ကွန့် မန့် လေးတောင် ပါလာသေးတယ်
ခင်ဗျားကလဲဗျာရေးထည့်လိုက်တာ ကျုပ်တောင်ဖက်ရင်း တွန့်တွန့်သွားတယ် ဖြေးဖြေးလုပ်ပါဗျ...........
သိပ်ပြီးမှန်တာတွေ မပြောပါနဲ့ဗျာ.... ကိုယ့်ကိုတောင် တန်ဖိုးရှိအောင် မနေနိုင်တဲ့သူတွေ အများကောင်းကျိုးဆိုတာ ဘယ်ဖြစ်နိုင်မလဲ။ သူတို့ တော်လှန်ရေးသာ မှန်ကန်ရင် အောင်မြင်တာကြာပေါ့ဗျာ....အလကား ကောင်တွေပါ...ပြည်သူကို တစ်ပတ်ရိုက်ပြီး လိမ်ညာဝါးတီးဖွင့်နေတဲ့ ကောင်တွေပါ.....ထောင်ထဲဝင်ရ တယ်ဆိုတာလဲ တိုင်းပြည်ကို ဆူပူအောင်လုပ်လို့ပါ....ကျွန်တော်ကတော့ ၈၈ အရေးအခင်းကို တော်တော်တုန်လှုပ်သွားတယ်...အရှင် လတ်လတ် ခေါင်းဖြတ်သတ်တဲ့ သူသတ်ပွဲကြီးလေ ကမ္ဘာ မှာမြန်မာတစ်နိုင်ငံပဲရှိသေးတယ်....ဒီလိုဆန္ဒပြပွဲ တွေဖြစ်လာအောင် ဘယ်သူတွေလှုံ့ဆော်ခဲ့လဲ လူ့တရိစ္ဆာန်တွေ လှုံ့ဆော်ခဲ့တာလေ...ကိုယ်တိုင်ပါဝင် ဘူးတဲ့သူတွေ သိပါတယ်.....မိုးသီးဇွန်ဆိုတဲ့ကောင် ဘယ်ပြန်လာရဲမလဲ...အဲဒီကောင်က မွတ်စလင်ကောင်လေ ဘယ်သူသေသေပေါ့..တစ်နေ့ ဒီကောင်ဝဠ်ကြွေးပေးဆပ်ရအုံးမှာပါ.....အားပေးလျက်။
မြန်မာ လူမျိုး မှန်ရင် ဆားတောင်ဆရာတော် ဟောတဲ့ အမျိုးပျောက်မှာစိုးကြောက်စရာ တရားတော် ကို ပြီးဆုံးအောင် နားထောင်စေချင်ပါသည်။
17 January 2012 20:46
To the Author,(Asarefugee living in London)-Nope. That's not true for now. You can go back anytime to our country. You just need to withdraw your refugee status to see your family. If you don't believe the new regime, then your society will fight for you.(No apology and acknowledgment)- This is not rational. Cos the regime even didn't make any apology to Daw ASSK and Ko Min Ko Naing, why they should do for your father? In the mind and soul of Burmese people, Ko Mya Aye is smaller against with Daw ASSK and Ko MKN.(No support to rebuild their lives)-that's so untrue. The regime only need to support to the ordinary 62 millions Burmese people instead of those politician who fight for the people. Pls don't make your living as politician or (anything) if you expect compensation for your political movements.(U Shwe Htoo)- I think something must be difference between your father and U Shwe Htoo cos the new regime says they released all political prisoners except the one who committed crimes during their movements. How can you assure that he doesn't make any crimes or anything?(Some people says genuine reform)- No. it is not just "some people", it is U.S, it is U.K, it is France and it is the whole world. You are insulting to the the whole world including ASSK and wold leaders by saying that.(Political prisoner almost doubled)-Beingacampaign officer, you should have use exact numbers or any digits or numbers for the political prisoners. Pls don't just do "blind writing" like 'doubled'.(Political System responsible for these abuses)-Not only you can't appreciate the recent changes and positive reform in Burma, but you are trying to blame political system now. Do you ever think it is easy step to do at once? Do you want to say Aung San Suu Kyi's political system or cooperation with this regime is wrong? If so, can you suggest what kind of political system Burmese should follow? Pls outline the steps to do in order to achieve that system.(International pressure to support real reform)-I heard/read those phrase many times from you before. Are you trying to asking International to invade the Burma in order to change the regime? What kind of more pressure International can give to Burma right now except to go for the war? Do you think it is easy task to makearegime change? "You" have to do it yourself first, then international will support you firmly if you are the one who is true.Remark; above all comments are not meant to insult or offense to the author or Guardian. it is just different perspectives from me.To the Guardian,-I think this article is just author's personal feeling. I can't imagine reputable media like Guardian published it.Thank you.Regard,Nyi
Please write about it the way how you think
ကျေးဇူးပါ MEG!လူငယ်တွေဖြစ်ပြီး ဘာလို့စဉ်းစားဥာဏ်မဲ့နေကြလဲမသိဘူး ... အရာအားလုံးက ရင်မောစရာတွေပဲ...နိုင်ငံအတွက် အလိုအတိုက်အခံလုပ်နေမှ ... နိုင်ငံရေးလို့သတ်မှတ်နေကြရောလား......ကိုယ်လုပ်နေနဲ့ လုပ်ရပ်တွေက ပြည်သူတွေ နဲ့ နိုင်ငံအတွက် ဘာတွေ ထောက်ပြလို့ ရနေလဲ... ရခဲ့လဲ.. ကိုယ့်နိုင်ငံအတွက် တစ်ထောင့်တစ်နေရာကနေ အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ၀ိုင်းဝန်းကူညီပေးကြဖို့ မစဉ်းစားဘဲ .... အတိုက်အခံလုပ်ပြီး .. လမ်းဘေး ကလေကချေတွေ လို့ ထထအော်နေကြတယ်.. အချိန်မီ တားပေးပါ..........နိုင်ငံ့အတွက် ရင်မောမိလို့ပါ..........